အချိန်မြင့်ချိန်ကင်မရာ & အချိန်မြင့်ချိန်ဗီဒီယို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အချိန်မြင့်ချိန်ကင်မရာ & အချိန်မြင့်ချိန်ဗီဒီယို
အချိန်မြင့်ချိန်ကင်မရာ & အချိန်မြင့်ချိန်ဗီဒီယို APK ကို
အာဏာအရှိဆုံးတဦး၏အသုံးပြုမှုကို Make အချိန်ချုံးကင်မရာ app များကို Google မှာ Play ။ ရွေးချယ်စရာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အစမ်းကြည့်၏တန်ချိန်နှင့်အတူသင်အချိန်ချုံးဓာတ်ပုံပညာများအတွက်လိုအပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် tools တွေကိုအပေါငျးတို့သပါလိမ့်မယ်။ သင်လိုအပ်အားလုံးသည်, သင့်ရဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ် အချိန်မြင့်ချိန်ကင်မရာ & ဗီဒီယို တချို့အကြီးအရှုခင်း။ သင်အလွယ်တကူအကြိုက်ဆုံးနေရာများကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစုဆောင်းခြင်းများအတွက်သို့မဟုတ် Youtube, Vimeo နှင့်သင်အမှန်တကယ်သင်၏အချိန်ချုံးဗီဒီယိုများထံမှဝင်ငွေနိုင်သောနေရာကတခြားဗွီဒီယိုမျှဝေ websites များအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် hd ကိုအချိန်ချုံးကင်မရာဗီဒီယိုများစေနိုငျပါသညျ! 📷သင့်ရဲ့အချိန်မြင့်ချိန်ဗီဒီယိုခံစားကြည့်ပါ
သငျသညျနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အချိန်ချုံးဖန်တီးဖို့ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်လိုအပ်အားလုံးနည်းနည်းတီထွင်ဖန်တီးမှု, ကြီးသောရှုခင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ချုံးကင်မရာ App ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအ🎥 Start ကိုမှတ်တမ်းတင်အပေါ်ထိပုတ်ပြီးသင်အံ့သြဖွယ်အရာတစ်ခုခုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်! သင်တို့သည်လည်းတတ်နိုင်သမျှပွင့်လင်းစမ်းကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်သင်အကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးအချိန်ချုံးရှိသည်သည်အထိ app ကိုအတွင်းကနေသင့်ရဲ့ပြခန်းထဲမှာဗီဒီယိုများနှင့်အချိန်ချုံးရှုမြင်ကြသည်။ ယခုအချိန်မြင့်ချိန်ဗီဒီယို get
???? GREAT CONTROL ▶️
သင်ဗီဒီယိုများသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်စေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ချုံးကင်မရာ app ကိုအကြီးအစိတ်ကြိုက် features တွေပေးသည်! ပုံမှန်ဗီဒီယိုများ, အချိန်သက်တမ်းလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီဗီဒီယိုများနှင့်အချိန်ချုံးပုံရိပ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဘို့3မှတ်တမ်းတင် Modes သာရှိပါတယ်! ရိုးရှင်းစွာအသင့်ရဲ့ preference ကိုရှေးခယျြနှင့်ဓာတ်ပုံအနုပညာဖန်တီး! သင်တို့သည်လည်း Resolution, ပြန်ဖွင့်ပေးသလို frame rate, ကင်မရာရိုက်ကူးမှုနှုန်းနှင့်အများကြီးပိုကောက်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်မြင့်ချိန်ကိုဗီဒီယိုအချိန်ချုံးဓာတ်ပုံပညာနှင့်အတူကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ချက်ဤသာအပြုသဘောအသုံးပြုမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်သူလျှိုတစ်ဦးကင်မရာသို့စက hidden camera ကိုမဟုတ်ပါဘူး
???? အချိန်မြင့်ချိန်ကင်မရာ & ဗီဒီယို▶အင်္ဂါရပ်များ️
✅3အချိန်ကြာရိုက်ကူးမှုများအတွက် Modes သာမှတ်တမ်းတင်
✅ hyperlapse ကာလအတွင်းအနိမ့်ကျထရီနှင့်အနိမ့ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုအာကာသများအတွက်အသိပေးချက်များအရ
သင်အကြိုက်ဆုံးနဲ့အံ့သြဖွယ်အချိန်ချုံးဓာတ်ပုံပညာနှင့်ဗီဒီယိုများကိုအတူအဘယ်သူကိုမျှအထင်ကြီး! A ကောင်းဆုံးအချိန်ချုံးကဗီဒီယို app ကို။ ဤအချိန်ချုံး app ကိုစွန့်စားမှုခရီးစဉ်များအတွက်ကြီးလှ၏။ ကျနော်တို့လူတိုင်းသုံးစွဲဖို့အဘို့ဤအချိန်ချုံး app ကိုပြီးပြည့်စုံသောစေပြီ။ အဖြစ်ဝေးအရည်အသွေးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောငျးဆုံးအခြိနျချုံးကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသူလျှိုကင်မရာသို့စက hidden camera ကိုမဟုတ်ပါဘူးသတိပြုပါ။ ဒီ App ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြုသဘောဖြစ်သင့်သည်။ ယခုသင်သင့်ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးနိုငျအဖြစ်ယခုသင်သည်အချိန်ချုံးဗီဒီယိုကင်မရာအဘို့အ hi နည်းပညာပစ္စည်းကိရိယာများမလိုအပ်ပါဘူး။ ဤအချိန်ချုံးကဗီဒီယို app ကိုနီးပါးတိုင်းမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အချိန်ကြာမှုဗီဒီယိုများရိုးရှင်းသောဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်းနှင့်အတူမတိုင်မီစေရန်လွယ်ကူသောဘယ်တော့မှခဲ့ကြသည်
App ကို timer နေရာမှာကင်မရာအဖြစ် vidoes များအတွက်ကြာအချိန်ကို အသုံးပြု. အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါအချိန်အပိုင်းအခြားအကောင်းဆုံးနည်းပညာနှင့်အတူချိန်ညှိနေသည်။ ကင်မရာကိုမပိုလိုအပျသောသည်နှင့် hyperlapse လည်းအလားတူလမ်းအတွက်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်ငှားရမ်း။ timer နေရာမှာ cam App ကိုအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ bulletproof ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကင်မရာရှိပါကထို့နောက်သင်အစွန်းရောက်အခြေအနေများအတွက်မှတ်တမ်းတင်။ ရှေးခယျြစရာခုနှစ်တွင်လိုအပ်သောအဖြစ်စားပွဲပေါ်မှာကင်မရာကိုလည်းသုံးနိုငျသညျ့အခြိနျပါဝင်သည်။ ရှေ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တို့သည်လည်း facelapse ဗီဒီယိုများစေနိုင်သည်။ ဒီ facelapse ဗီဒီယိုများအလွန်ရယ်စရာနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်သစ်ကိုလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်သကဲ့သို့။ ယနေ့ဤကွီးစှာသောအချိန်ချုံး app ကိုရယူပါပျော်မွေ့
ဒီအလင်းအခမဲ့နှင့်အလွန်အမင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အချိန်ကြာရိုက်ကူးမှု App ကိုရယူပါကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ချုံးဓာတ်ပုံကို app ကိုပေါ်အလုပ်လုပ်ပါစေ!
အချိန်မြင့်ချိန်ကင်မရာ & အချိန်မြင့်ချိန်ဗီဒီယို
5.20 ကို MB
Kaka Mama စတူဒီယို
iRecorder - ဗီဒီယို ...
Recorder ကို Capture ...